Polisy Mahafinaritra? Vonona Ho Amin’ny Fiovana Lehibe Amin’ny Taona Vaovao i Ozbekistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2018 5:14 GMT
Lahateny naharitra efatra ora nataon'i Mirziyoyev. Sary avy amin'ny gazetin'ny fiadidian'ny filoham-pirenena.
Ny ezaka farany indrindra haneho an'i Mirziyoyev ho toy ny polisy mahafinaritra ao amin'ny firenena feno olon-dratsy no noresahana tamin'ny fiandohan'ity volana ity .
Tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana septambra tamin'ny herintaona i Mirziyoyev, 60 taona, noho ny fahafatesan'ny fitondrana didy jadona naharitra ela an’ i Islam Karimov.
Nanomboka ny fitondran'ny mpandimby azy efa ho telopolo taona izay raha mbola repoblika sovietika ny firenen'i Azia Afovoany ary nahita fa latsaka farany ambany amin'ny laharana momba ny zon'olombelona manerantany ny firenena. Malaza kokoa amin'ny fampijaliana matetika, tahaka ny fandoroana amin'ny rano mangotraka sy ny asa an-terivozona tany amin'ny saha fambolena landihazo ao amin'ny firenena i Ozbekistan.
Taorian'ny fifidianana “pro-forma” [kisarisariny] telo volana taty aoriana, nanamafy ny toerany fara-tampony ao amin'ny sangany ara-politika ao amin'ny firenena tsirefesimandidy tamin'ny alalan'ny hafatra tsotra ny praiminisitr'i Karimov taloha efa nitondra ho 13 taona mahery: tsy maintsy miova ny zava-drehetra.
Nanamafy izany hatrany izy hatramin'izao.
Te-hahita fiovana eo amin'ny fiainan'izy ireo ankehitriny, fa tsy rahampitso, ary koa tsy any aoriana any ny olona. Manan-jo amin'izany ny vahoakantsika izay miasa mafy, tsara fanahy sy malala-tanana.
Fantaro ilay olona vaovao, fa tsy ilay fahiny
Nahazo “tiako” avy amin'ireo mpiserasera Ozbek ny fandefasana mivantana ny lahateny fanao isan-taona nataon'i Mirziyoyev tamin'ny 22 Desambra, izay ahitana manampahefam-panjakana marobe nitehaka mitovy gadona.
“Hiaro anao enie Allah, Shavkat Miramonovich hajaina”
“Misaotra. Ho salama sy voaaro anie ianao,” hoy ny vakin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook mandefa mivantana ny kabarin'i Mirziyoyev. “Raha miezaka mafy hanova ny toe-javatra ao amin'ny firenena ny filoha, tokony hanampy amin'izany ny tsirairay”, hoy ny fanehoan-kevitra iray hafa.
Raha marika tamin'ny vanim-potoanan'i Karimov ny asa birao miankin-doha tanteraka, tsy tahaka izany kosa ny fandefasana mivantana. Narahana fanovana endrika sasantsasany ny fiovana.
Manomboka amin'ny famotsorana ireo gadra politika hatramin'ny fanomezana baiko ny fandraràna ny fitsidihana any ivelany sy ny famerana ny fifanakalozana devizy, efa nanala ny maro tamin'ireo politikan'i Karimov i Mirziyoyev.
Angamba indrindra indrindra, nankatoa ny asa an-terivozona ao amin'ny tany fambolena landihazo ahazoam-bola ao amin'ny firenena ihany koa izy izay efa nahitana ankizy mpianatra an'aliny niaraka tamin'ireo mpampianatra sy mpitsabo mpiasam-panjakana notazonina an-tsokosoko mba hiasa ho mpioty.
Saingy nanomboka izany fanovana izany izy no sady mihazona ny rafitra tsy refesimandidy sy manohy manaja ampahibemaso an'i Karimov, izay mitoetra ho ray sy mpanorina an'i Ozbekistan mahaleotena.
“Tena nahaliana ny nihaino anao. Avelao ny filohanay ho salama. Inshallah, hoavy mamirapiratra no miandry anay. Mino izahay, Shavkat (Mirziyoyev)
Ohatra, araka ny voalazan'ny Reuters, nanome tsiny an'ireo “mpahay toekarena” tsy voafaritra i Mirziyoyev nandritra ny kabariny momba ny fandisoana ny lahatahiry ara-toekarena nandritra ny fotoana nitondran'i Karimov.
Zava-poronina ny valopolo isanjato (fitomboan'ny harin-karena). Am-pahatsorana, nandidy ny hanamarihana im-polo heny ny tarehimarika 5,5 isanjato aho [ny taona 2017]! Tamin'ny taona 2017, namorona asa vaovao 336.000 izahay ary tarehimarika tena izy izany. Talohan'izay, efa zatra nitatitra momba ny famoronana asa an-tapitrisany isan-taona isika. Tsy misy firenena eto amin'izao tontolo izao afaka manao izany!
“Shavkat Miramonovich, miaraka aminao izahay rehetra. Tsy misy filoha tahaka anao manerana izao tontolo iao!” hoy ny mpaneho hevitra iray.
Manana faniriana bebe kokoa
Tsy ny Facebook ihany no toerana misy ny filoha vaovao. Manana mpanjohy maherin'ny 82,000 ny fantsony Telegram, fampiharana hafatra malaza indrindra any Ozbekistana,ary ny Instagram-ny kosa manana mpanjohy 240000. (Hafahafa ihany ny tsy maintsy nanokafany kaonty ofisialy tao amin'ireo sehatra media sosialy roa lehibe indrindra ao Rosia, VKontakte sy Odnoklassniki ireo, na dia eo aza ny lazan'ireo ao amin'ny repoblika).
Namorona fitaovana vaovao koa i Mirziyoyev mba hiteraka fanehoan-kevitra avy amin'ny vahoaka momba ny politikan'ny governemanta .
Ny fandraisana an-tseraseran'ny Filohan'i Ozbékistan dia nanjary karazana ivon-toerana demaokratika hiatrehana ny fangatahan'ny olom-pirenena.
Zava-dehibe ny mamorona tranokalam-baovao “Ny Hevitro” mba ahafahan'ny olom-pirenena maneho ny fomba fijeriny momba ireo olana manan-danja ao amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina.
Saingy na dia mampiseho ny tenany ho olo-malaza amin'ny ho avy aza ny mpitarika Ozbek – natao ho taonan'ny Fandraharahana, Famoronana sy ny Teknolojia ny taona 2018- voatery hiatrika ny endrika ratsin'ny firenena vao haingana sy ankehitriny izy.
“Avelao hivoaka ny fonja ireo olona tia fivavahana. Eritrereto ny hoavinao, Shavkat! “
“Tianay mba havotsotra ireo lasibatry ny sazy ara-politika mahatsiravina! Afaho avy hatrany ireo olona tsy manan-tsiny !
Indrindra indrindra, nifandona tamin'ny sampam-piarovam-pirenena SNB (mpandimby ny KGB), izay matetika lazaina fa fanjakana iray ao anatin'ny fanjakana i Mirziyoyev, tamin'ny alalan'ny fitakiana ny fanavaozana ny sampana nandritra ny kabariny.
Nodidiany ihany koa ny manampahefana mba hiala amin'ny fitadiavam-bola hafa, fa tsy miditra amin'ny fanarahamaso tsy tapaka manampy ireo mpanara-maso mpanao kolikoly hameno ny paosiny.
Saingy ankoatra ny tolona anatiny ifanaovan'ireo samy sangany, tsy maintsy miatrika ny fitomboan'ny zavatra andrasan'ny governemanta izy satria mampiasa ny feo vaovao nomena azy mba hitaky fanovana betsaka haingana kokoa ny vahoaka ory amin'ny ankapobeny.
Raha ny momba ny zon'olombelona, ohatra, navotsotr'i Mirziyoyev ireo gadra politika lehibe izay nahita ny sazin'izy ireo nitarina .tsy ara-dalàna. Na izany aza, nampiditra ny hafa am-ponja ny fitondrany, nitarika hiresaka momba ny “varavarana mihodina” ao amin'ny fonjan'ny firenena.
Mbola mahita varavarana mivoha ho azy hanaovana fisamborana ara-politika” ao Ozbekistan ihany izahay – nosamborina tamin'ny fiampangana mampihomehy ilay mpanao gazety Bobomurod Abdullaev
Tao anatin'ny fandrosoana tsy hay takarina nandritra ny fitondran'i Karimov, nanana herim-po ireo Ozbek mpaneho hevitra sasany tao amin'ny Facebook hangataka amin'i Mirziyoyev hanatsara ny fahalalahana ara-pivavahana sy hamotsotra ireo olona any am-ponja noho ny fiampangana tsy marina ho ekstremista. Ny hafa kosa nitaky ny hampihenana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
“”Ataovy mora kokoa ny vidin-tsakafo, ary avy eo ny trano ipetrahana!”
Ny fifandraisana ivelany no sehatra iray tsy ahafahany manao fahadisoana amin'izao fotoana izao.
Namolavola fifandraisana mangatsiaka sy mifandrafy mampidi-doza indraindray amin'ireo mpifanolo-bodirindrina ara-paritra any Ozbekistana i ilay Islam Karimov tsy voafolaka.
Nanova izany i Mirziyoyev, namaha ny fifandirana momba ny sisintany tamin'i Kyrgyzstan ary nampitohy indray ny sidina mankany Tajikistan ampahefatry ny taonjato taty aoriana. Mbola mety hanohana ny fananganana tohodrano famokarana herinaratra ao amin'ny firenena roa tonta izy, tetikasa izay notoherin'i Karimov mafy.
Fa na ao an-tanindrazana na any ivelany, mora ihany ny fampidirana fanovàna. Sarotra kokoa anefa ny mahita azy ireo, sy miatrika ny fiantraikany sy ny fanoherana mandritra ny fotoana. Ho an'i Obekistan, mampanantena fa ho taona hafa tena mahaliana ny taona 2018.